Rombo ao Tsimbazaza - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Rombo ! Raha vao ny voambolana “rombo” no re dia avy hatrany dia ny kandidà Didier Ratsiraka no tonga antsaina re. “Rombo, rombo” hoy izy sady nandrisika ny olona hiaka mafy fony mbola natanjaka ny hoza-peo sy hoza-peny. Fa eto kosa isika dia tsy hiresaka momba ity mpanao politika malaza ity. Hiresaka rombo isika satria dia nisy rombo tao Tsimbazaza tao.
Raha vao Tsimbazaza no re dia matetika ny valan-java-boahary no ao antsaina. Isan’ny hita ao amin’ity valan-java-boahary ity ny gidro. Fantatra fa ato ho ato dia hisy ny seminera iraisam-pirenena momba ny fandinihana ny gidro izay ho tontosaina eto Madagasikara. Mbola tsy io ihany koa anefa ny anton-dresaka eto anio. Na azo sy tokony ary mendrika hanaovana tafatafa eto tokoa izany gidro izany.
Inona ihany e ?
Raha vao manonona Tsimbazaza dia isan’ny tonga ao antsaina koa ny Depiote. Fa ao Tsimbazaza no misy ny foiben-toerana hivorian’izy ireo. Toerana tsy mifanalavitra ireo. Tsia. Tsy milaza akory isika fa gidro izy ireo. Ialana tsiny, ialana salohy fito izany raha misarika fampifangaroan-dresaka toa izany ny teny natao. Omena ny voninahitra tokoa ireo solombavam-bahoaka ka ialako lavitra impito mandifotra olona ny fanomezana fakam-panahy antsika mpamaky izao tafatafa izao. Tsy milaza aho fa gidro ireo olomboafidy ireo. Andrian-dray aho, andrian-dreny… mivadika tanalahy raha mihevi-dratsy… fiteny fahazaza izany.
Fa rombo no niseho tany Tsimbazaza io 21 okitobra io. Rombo nandritra ny fanokafana ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ho an’ny antenimieram-pirenena. Ny Lalampanorenana no mamaritra izany fe-potoana izany. Voalaza fa ny talata faha-3 amin’ny volana okitobra no misokatra ny fivoriana ara-potoana faharoa.
Rombo no hita teo amin’ny filohan’ny Vondrona parilemantera Hvm sy ny depiote Siteny Randrianasoloniaiko. Ity farany dia mpikambana tao amin’ny vondrona parilemantera io teo aloha. Nanambara tamin’ny haino aman-jery ny tenany fa hiala tsy ho mpikambana ao anatin’izany vondrona izany intsony fa hiverina ho depiote tsy miankina. Nilaza anefa ny filohan’ny vondrona Hvm fa tsy mbola nisy nametra-pialana izany. “Démission médiatique no nisy” hoy ny filohan’ny vondrona Hvm. Tezitra ny depiote Siteny Randrianasoloniaiko. Nanangam-bovona. Hita ho vonona hifampitana, ny tenany koa moa malaza ho mahay miady… Tsy zava-baovao izany depiote mifampikasi-tanana izany teto an-tany (efa nisy izany tamin’ny andron’ny CT). Na izany aza… Izay ve no lalana mankany amin’ny tsara ? Matoa nialanao ilay vondrona (raha tena nialana tokoa) dia satria vonona hampiseho toetra tsara kokoa ianao. Izay ve no hita ? Toa mifanipaka ro-lahy e…
Aza manaiky, asio...
Vita izay sinema izay hita taorian’ny fanokafana izay dia nihiboka aman-trano tao ireo depiote sasany. Tsy fantatra ny lahadinika. Tsy fantatra iza avy no nandray anjara tao. Efa andro maromaro talohan’izao fisokafan’ny fivoriana izao no efa nisy nandrangitra an-gazety fa hametraka rijan-teny fitsipaham-pitokisana ireo depiote. Efa ho zato ny sonia voaangona e… Azo antoka fa tsy ho azo ihodivirana ny fanonganana izao governemanta izao. Dia vaka ny saina ! ‘Ndeha hatao hoe marina tokoa fa hahongana ny governemanta dia hanao ahoana izany ilay PND ? Io anefa no voalaza fa lakilen’ny famoahana ireo famatsiam-bola efa nampanantenan’ireo havana any dilam-bato. Dia ho sanatria ve… tiana hahemotra ny fampivoarana an’ity firenena ity ? Soritana fa ny fandravonana farany sy fankatoavana ny drafitra nasionaly momba ny fampivoarana (PND) dia ho tontosaina any Mahajanga ny 24 okitobra izao. Ho ezaka very maina ve izany asa izany ? Ho hararaka ve ny ilo mby an-doha ?
Nirava tsy nisy fanapahan-kevitra matotra ny an’ireo depiote nivory tao Tsimbazaza. Sazy mihantona ve ? Ho tantara mitohy ve ? Mba rahoviana no fihavanana, fitoniana ary fampandrosoana tokoa no voizina ao Tsimbazaza ao ? Ilay Lapa io fa tsy ilay valan-java-boary. Ho Lapa hanjakan’ny fifanajana… Lavitry ny rombo. Nofiko hono.